FREEDOM AIRLINE iyo qiima-dhimista duulimaadka xajka iyo dareenka shacabka (dhegayso) – Radio Daljir
FREEDOM AIRLINE iyo qiima-dhimista duulimaadka xajka iyo dareenka shacabka (dhegayso)
Luulyo 8, 2018 4:40 g 1
Sida uu qorshuhu yahay 31 bishaan Luulyo waxaa si toos ah u bilaaban doona dulimaadyada Xajka ee xujeyda Soomaalida si ay soo gutaan wadibaadka Xajka.
Xujayda Soomaaliya oo muddooyinkii danbe aad uga cabanayey qiimaha lagu tago Xajka oo gaaray lacag dhan $3,875 ayaa wadaxaajood dheer oo adag oo dhexmaray shirkadaha duulimaadyada iyo dowladda Soomaaliya kabacdi waxaa haatan qiimaha Xajka laga dhigay $3,300.
Freedom Airline iyo maamulkeeda oo kamid ah hormuudka diyaaradaha duulimaadka Soomaaliya, ayaa qayb ka ahaa wada xaajoodka suurtagaliyey qiima-dhismista, waxa aana arrinkaas ka wareysanay Fu’aad Abshir Xasan, maamulka sare ee shirkada Freedom Airline.
Wariye Xasan Heykal ayaa Md. Fu’aad Abshir ka waraystay dadaalka Freedom Airline iyo qorshaheeda cusub ee Xajka sannadkan 2018, iyo tasiilaad hufan oo casri ah oo ay diyaar ula yihiin Xujeyda Soomaaliya ee sannadkan gudanaya waajibaadka Xajka.
Hoos ka dhegayso wareysiga Fu’aad iyo qorshaha xajka ee shirkadda Freedom Airline.
Hoos ka dhegayso aragtida shacabka Soomaaliyeed iyo tasiilaadka cusub ee Freedom Air.
Maqaalo Kale 245 Wararka 17281
Shirkii ay soo qabanqaabiyeen Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo miradhal noqday
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu soo dhoweeyey Baydhabo
darwiish 1 year
qiimuhu weli aad buu u badan yahay marka loo eego masafada sucudigu inoo jiro.